अनुभवः लोकसेवाको जाँचमा कसरी सफल हुने ?
HomeTipsअनुभवः लोकसेवाको जाँचमा कसरी सफल हुने ?
Chakrapani Bhandari August 29, 2018
वि.सं. ०५३ सालदेखि ०७३ सालका बीचमा मैले नासु, अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव पदको लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएका परीक्षाहरूमा निरन्तर सहभागी भई सफल हुँदै आउँदा मैले अनुभव गरेका कुराहरू सम्बन्धित परीक्षाका उमेदवारहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छन् भन्ने ठानेर आफ्नो अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ आफ्नो अनुभवलाई यहाँ पस्कने जमर्को गरेको छु ।
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भनेको उत्तीर्णाङ्क ल्याएर मात्र सफल हुन सकिन्न । सफल हुनका लागि उत्तीर्णाङ्कका साथसाथै अन्य प्रतिस्पर्धाहरू भन्दा बढी अङ्ग ल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ हरेक वर्ष एउटै तहको प्राप्ताङ्कले उम्मेदवारहरू सफल भैरहेका हुँदैनन । कुनै वर्ष प्रतिस्पर्धीहरूको औसत अङ्क कम भएको अवस्था रहेछ भने अलि कम अङ्कमा पनि पास भइन्छ भने कतिपय अवस्थामा उपल्लो अङ्क ल्याएर पनि पास नहुन सकिन्छ ।
हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो तहको ज्ञान हुन्छ र त्यही तहको ज्ञानलाई उसले आफ्नो सत्य ठानेको हुन्छ । सत्य भन्ने कुरा परिवर्तन भैरहने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ । हिजो देखेजाने र बुझेका कुराहरू आज असत्य सावित भैरहेका छन भने आजका सत्यहरू भोली अझ खोतलिन सक्नेछन् । मेरो तहको सत्य अरूका लागि त्यहि तहको नहुन सक्दछ । आफूले जुन तहको जानकारी राखेको हुन्छ त्यहीस्तरसम्मको ज्ञानलाई उसले सत्य मानेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगको जतिपनि परीक्षामा मैले सहभागी भएँ र सफल हुँदै आएँ त्यसबाट प्राप्त गरेको ज्ञान मेरालागि सत्य हुन जुन यहाँ उल्लेख गरेको छु । यस ज्ञान सामग्रीलाई यहितहमा रहेर पाठकहरूले वुझिदिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु ।
प्रायजसो उम्मेदवारहरू पहिलो प्रयासमै पास हुनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । उसले प्रतिष्पर्धाको तौरतरिका र त्यसको संरचना मिहिन तरिकाले बुझेको नहुने कारणले पनि दिग्गज उम्मेदवारहरू पनि पहिलो परीक्षामा सफल हुन सक्दैनन् । औपचारिक शिक्षामा अत्यन्त अव्बल ठहरिएका विद्यार्थीहरू पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा असफल भैरहेका हुन्छन् । स्कुल क्याम्पसमा र दैनिक उठबस साथीसँगी सँगको व्यवहारमा सामान्य क्षमतामा दरिएका विद्यार्थीहरू पनि सहजै सफल भैरहेका हुन्छन । यस्ता घटनाहरूले विद्यार्थीहरूको मनमा अनेक प्रश्नहरू उब्जिने गर्दछन् । उनीहरू विभिन्न तर्कना गर्दछन् । परीक्षा प्रणालीमै दोष पो छ कि भन्ने सम्मका लख् काटने गर्दछन् । यस्ता उम्मेदवारहरूलाई सामान्यतया निम्नानुसारका मनोभावनाहरू सृजना हुन्छन कतिपय उनीहरूले व्यक्त पनि गर्दछन्, गरेको हामीले सुनेका देखेका पनि छौं । लोकसेवा आयोग वा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहेका उम्मेदवारहरूका लागि उपयोगी होस भन्ने उद्देश्यले मैले यो सामग्री तयार गरेको छु ।
प्रत्येक शीर्षकको बारेमा कम्तिमा चारवटा पक्षबाट अध्ययन गर्नेः(क) त्यसको अर्थ, (ख) त्यसको बारेमा भैरहेको अभ्यास वा प्रयासहरू वा सरकारले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरू, (ग) त्यसको बारेमा हालको परिमाणात्मक तथ्याङ्कीय तथा व्याख्यात्मक अवस्था, (घ) त्यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश वा हाम्रा नीतियोजनाहरूले परिलक्षित गरेको अबको बाटो/अबको कार्यदिशा
समसामयिक वृहत विषयहरू/सवालहरू/मुद्दाहरूका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउने ।
प्रायजसो परीक्षार्थीहरूले एक भन्दा वढी समूहको परीक्षाहरू दिने तयारी गरेका हुन्छन त्यस्तो अवस्थामा सबै पाठ्यक्रमलाई सकेसम्म सामूहिकीकरण(Clustering) गरेर अध्ययन गर्दा नदोहोरिने र सङ्गठित पनि हुन्छ ।
(लेखक सुमन दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)